DFS oo ka Falcelisay walaaca ay qabaan Beesha caalamka ee…
Xukumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay walaacii ay maanta Beesha Caalamka ka muujiyeen nooca doorashooyinka sanadka 2020-21 maadamada Xilka laga tuuray Wasiirkii 1 aad Xukumada Xasan Cali Kheyre xilli xil haynta hay’adaha dastuuriga ah ee dalka dhamaad tahay.
Sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda Xukumada Muqdisho Axmed Ciise Cawad ayaa tilmaamay in aysan jirin nooc doorasho oo ay si gaar ah u doonayso Xukumadda Faderaalka Soomaaliya, isagoo sheegay in Xukumadu qabaneyso doorashada dhamaan dhinacyadu heshiis ku yihiin.
Danjire Cawad oo Talaadada maanta u waramay laanta Af Soomaaliga BBC-da ayaa cadeeyay in uu maanta warbixin siiyey wakiilada beesha caalamka ee saldhigoodu yahay xerada amaankeeda aadka loo adkeeyo Xellane.
“Waa kulan joogta ah oo ah dhaqan diblumaasiyadeed oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda dal ay u warbixiso diblumaasiyiinta dalkeeda jooga, adigu markii muddo la joogaba uga waranta xaaladaha dalka ka jira iyaddoo xog ogaal u ahay oo codka dowladda la maqlo,” ayuu shaciyey Wasiir Cawad.
Xukuumada ayuu ku adkeystay in ay ka shaqeyneyso sidii coddeyn wadar-ogol ku timid u dhici lahayd dalka sigoo ” hadal sax ah” ugu yeeray hadalkii maanta ka soo baxay beesha caalamka ee ahaa in aysan sharci noqo doonin doorasho ay qabtaan hal dhinac oo aysan ka qayb galin dhamaan saamilayda Siyaasadda.
“Warqada kasoo baxdey Mareykanka waa soo afjartay markii ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aniga aragtideyda kamid ahaa ra’iisul wasaareyaashii ugu fiicnaa ee dalka soo mara uu si sharaf leh u aqbalay go’aankii baarlamaanka,” ayuu kaga jawaabay hadalkii Mareykanka ku naqdiyey xil ka qaadistii Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda Xukumada Muqdisho Axmed Ciise Cawad, oo ku adkaystay in madaxda Soomaalida “aysan caado u ahayn in wax loo yeeriyo,” haddana talooyinka kaga imaanaya saaxiibada caalamka ayuu qiray in ay tixgelinayaan “casharna ka baranayaan” sida hadlayay BBC-da.
1 Jannaayo 2019, oo xukumadu Muqdisho ku amartay wakiilkii gaarka ahaa ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom in uu si degdeg ah waddanka uga baxo, ka dib markii uu warqad ku aaddan rabshadihii ka dhacay Baydhabo u diray wasiirka amniga gudaha ayaa waxaa xukumadu ku faantay in ay xakamaysay adoowe Beesha caalamka ee Faragalinta arimaha siyaasada dalka.
Hayeeshee 25 bishaan war ka soo baxay Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho laguna dhaleeceeyay qaabka loo maray eryidii wasiirka 1 aad ee Xukumada Xasan Cali Kheyre ayaa loogu janbay waxa loogu yeeray “Qaswadayaal” taas oo laga bixiyay fasiraado kale duwan.
“Haddii shaqsi ama hay’ad ay raadiso in ay awooda kaligeed maroorsato waxa ay carqaladaynaysaa xasiloonida qaranka oo dhan” ayaa lagu cadeeyay bayaankaas oo mu muuqday mid toos loogu cadaadinaayay Madaxtooyada iyo Golaha shacabka oo ku lug lahaa eryidii Xasan Cali Kheyre.
Kadib xilka xayuubinta Xasan Cali Khayre oo ahaa Ra’iisul wasaare ugu waqtiga dheeraa 20 sano ee la soo dhaafay ayaa Xubnaha mucaarad iyo Beesha Caalamka waxa ay ku qeexeen mudo korarsi ay damacsanyihiin Hogamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Gudoonka golaha shacabka.
Hogamiyaha iyo Ra’iisul wasaaraha ayaa ka qeybgalay shirkii Dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda maamul Goboleedyada kaas oo looga hadlay in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Balse Xasan Cali Khayre oo sharci darro ku tilmaamay hannaankii loo maray codeynta ayaa sheegay in uu si iskiis ah xilka isaga casilay, “isagoo u turaya dalka”.